Fanomanana fidirana: vidiana tsikelikely ny fitaovam-pianarana | NewsMada
Tsy nitsahatra namoaka vola ny ray aman-dreny, nanomboka tamin’ny fiandohan’ny taom-pianarana 2019-2020 ka hatramin’izao fanomanana ny taom-pianarana vaovao izao. Rehefa vita ny fanoratana anarana teny amin’ny sekoly, manangona ny kojakoja entina any an-dakilasy indray izao.
Manomana ny fitaovam-pianarana ho an’ny mpianatra ny ray aman-dreny, amin’izao fotoana izao satria hiditra amin’ny fiandohan’ny volana oktobra ny ankamaroany, misy kosa ny efa any an-dakilasy, ankehitriny. Na tsy niakatra be aza ny vidin’ny fitaovam-pianarana, manoloana ny fahasahiranana, mikaikaiky ny ray aman-dreny fa mahalany hatramin’ny 100 000 Ar ny mpianatra iray nefa ny vidin’ny boky ilaina tsy mbola ao anatiny akory. Any an-tsekoly ihany no vidina na hofaina ny boky, arakaraka ny fandaminana. Misy koa ireo ray aman-dreny mifanakalo boky hanamaivanana ny vola mivoaka.
Ireo ankizy madinika (tout petit, petite section …) no tena mila fitaovana samihafa nefa lafo ny vidiny. Ny sekoly tsy miankina sasany rahateo mitaky anarana marika manokana mba haharitra hatramin’ny fiafaran’ny taom-pianarana ireo fitaovana ampiasaina. Vidina tsikelikely ny kojakoja ka ireo tena lehibe toy ny kahie no hanombohana azy aloha, hoy ny renim-pianakaviana manan-janaka telo mianatra. Ny kitapo tsy soloina vaovao fa ny tamin’ny taon-dasa no sasana fotsiny. Tsy maintsy miatrika ny zava-misy nefa koa tsy azo hajanona amin’ny fianarana ny kilonga. Arindra ny fandaniana hafa ao an-trano hahazoana vola atokana ho an’ny fitaovam-pianarana.
Nambaran’ny mpivarotra fa nihena be ny isan’ny ray aman-dreny mividy fitaovam-pianarana, hatreto raha mitaha ny tamin’ny taon-dasa mialoha ny fidirana. Tsy niakatra ny vidin’ny kojakoja satria mbola nanana tahiry maro izy ireo ka navoaka indray, hoy ny mpaninjara eny Tsaralalàna. Rehefa tsy maty antoka fotsiny dia alefa ny entana fa iaraha-miaina ny fahasahiranana.